Na-ebuli Nzipụta Ngwa Ahịa Mobile Gị na Mobile Action | Martech Zone
Na-ebuli Nzipụta Ngwa Ahịa Mobile gị na Mobile Action
Wednesday, June 10, 2015 Tuesday, June 9, 2015 Douglas Karr
Ekwentị Mkpanaaka ugbu a na-enyere aka karịa ngwa 70,000 iji nweta ndị ọrụ yana nhọrọ nke ngwaọrụ nnweta onye ọrụ, nyocha, yana nyocha amụma ọhụụ ewepụtara ọhụrụ.
Companylọ ọrụ ahụ arụọla a Big Data engine nke na-enye ndị mmepe ngwa akara akara na ihe karịrị 8 ijeri data data, gụnyere ụdị, ọnọdụ, oge, ahịa, ndị asọmpi, Organic / ugwo uto, na ndị ọzọ. Dabere na nyocha a sara mbara, Mobile Action na-atụ aro maka arụmọrụ maka otu ndị mmepe nwere ike isi meziwanye ọhụhụ nke ngwa ha.
Ngwaahịa ya nwere ike (ma nweela) nyere ndị mmepe aka karịa okpukpu abụọ ha na ntanetị na ụbọchị 30, yana see Top 10 chaatị. Ngwaọrụ a na - ebukwa amụma amamịghe maka ịkwalite arụmọrụ App Store site na ịnye ndị mmepe nyocha oge kachasị mma iji gbaa mkpọsa, ihe na-eso ndị asọmpi ha na oge kacha mma iji melite.
Injin ahụ na-enye nghọta maka ihe na-efu site na usoro nnweta onye ọrụ, omume kachasị mma, ọwa ma ọ bụ ngwaọrụ ọ ga-eji, yana ụzọ kachasị dị irè iji wepụta mmefu ego. Ọ na-emekwa ka ndị mmepe mara mmetụta omume ha ga-enwe. Á »examplemá» example maatá »,, optimizing for X keyword will belata nkezi na-eri kwa wụnye site 20%. Nkwado ọ bụla dị iche maka ngwa ọ bụla.
Nchọpụta ngwa mebiri emebi na nke a bụ nnukwu nsogbu na ahịa, n'ihi na ụlọ ọrụ amaghị etu esi ahụ ngwa ha. Ekwentị Mkpanaaka na-eme ihe ComScore mere, mana ọ bụ maka ngwa, ọ na-enwe mmetụta dị egwu na ọganiihu ha. Ọ dịghị onye na ahịa na-eme ihe anyị na-eme. Mobile Action guzobere Aykut Karaalioglu
Mobile Action na-enye Storelọ Ahịa App zuru ezu nchịkọta na njikarịcha njikarịcha. Ihe ngwọta ya gụnyere App Store Optimization, Recommend Omume, Asọmpi Insight Analysis, na Review Analysis. Na mgbakwunye na nsuso na nghọta, Mobile Action na-eji teknụzụ amụma iji nye omume akwadoro maka otu esi enweta ngwa gị n'elu.
Ngọnarị: Ana m etinye koodu ịgba akwụkwọ na post a. Ọ bụrụ na ị debanye aha, m ga-enwetakwa ọnwa ụfọdụ eji na ngwa ahụ.
Tags: ụlọ ahịa ngwanjikarịcha ngwa ahịaogo ụlọ ahịannukwu dataomume mkpanakaekwentị mkpanaaka ngwa ahịaụlọ ahịa ekwentị
Benchmarks: Kedu ka Webinars gị na-arụ nke ọma?
Flippies: Mgbanwe nke Teknụzụ Narị Afọ-Ochie